Howlgal laga sameeyay Xaafado katirsan Magaalada Baraawe | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Howlgal laga sameeyay Xaafado katirsan Magaalada Baraawe
Ciidamo katirsan Booliska Soomaaliya ayaa howlgallo lagu xaqiijinayay Amniga waxaa ay ka sameeyeen xaafado kamid ah Magaalada Baraawe oo ah Xarunta rasmiga ah ee Maamulka Koonfur Galbeed walow Maamulku uu ku Shaqeeyo Magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay.
Ciidamada ayaa howlgalka waxaa ay intiisa badan ka sameeyeen waddooyinka waaweyn ee degmada Baraawe, waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa degmada iyaga oo baarayay Gaadiidka noocyadiisa kala duwan & Guryaha qaar oo ay degan yihiin dadka Shacabka ah.
Taliyaha Booliska degmada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha Hoose Gaashaanle Maxamed Salaad (Caana-nuug) ayaa sheegay in howlgalkan uu yahay mid la joogteyn doono loogana hortagayo Al-Shabaab iyo Kooxo Burcadda ah ee dhaca geysta.
Sidoo kale wuxuu taliyaha hadalkiisa uu intaasi ku daray in howlgallada ay noqon soonaan kuwo sii socda, wuxuuna ugu baaqay inay Shacabka Ciidamada kala Shaqeeyaan sugida Amniga si loo xaqiijiyo Amniga Guud ee degmada.
Magaalada Baraawe ayaa waxaa ay kamid tahay meelaha ugu amniga Wanaagsan degmooyinka Gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana kusugan Ciidamada dowladda, kuwa Koonfur Galbeed iyo Ciidamo katirsan AMISOM.
Howlgal laga sameeyay Xaafado katirsan Magaalada Baraawe was last modified: March 21st, 2022 by warsan radio
Video Faahfaahin 4 nin oo Lagu Toogtay kuwaas oo Ka dambeeyay Qaraxyadii Mantaanaha Ahaa ee Baydhabo